Restaurants ku Izhevsk
Zvokudya zvaunosangana nazvo muguta guru reUdmurtia ndezvimwe zvakasiyana-siyana zvekudya zvekudya, zvinofadza mumhepo, basa rinofadza uye zvinonakidza zvinonakidza zvirongwa. Uye iwe unogona kudzidza pamusoro pezvakanaka zvekudya muIzhevsk kubva kwenyaya yedu!
Best restaurants in Izhevsk
Munzvimbo iri pasi pezita rinonakidza "Waini Nezvokudya" unogona kuedza kwete nyama yezvokudya chete (steaks, medallions, muto), asiwo dzimwe dzakawanda zvezvokudya zveEurope neRussia. Nguva dzose vashanyi vanokurudzira kudya kwekudya seimwe yezvinofadza zvikuru muguta. Mukuwedzera kune menyu inonaka, yekutengesa "Waini uye Nyama" muIzhevsk inokwezvawo vatengi nevanorarama music jazz. Asi ramba uchiyeuka kuti mavhareji ematengo mu cheki dzechirongwa ichi yakakwirira chaizvo.
Kwete yekupedzisira muchitarisiko chegastronomic establishments mu Izhevsk ndiyo yekudya "Kama" . Iyi yakave yakakura zvikuru uye ine mahwindo maviri uye imwe inonzi chimbi. Pano iwe unogona kunzwisisa zvikafu zvakawanda zvezvokudya zvechiRussia uye nyika - Udmurt cuisine. Chimwe chinhu chinowanikwa mumutambo wekudyira "Kama" chikafu cheJapan - zvose zvinotonhora uye zvinopisa. Iko kunakidza mukati uye kuimbira mimhanzi kunoita kuti nzvimbo iyi ive yakanaka kwazvo kune vagari nevaeni veIzhevsk.
Restaurant "Veranda" , inowanikwa nevekuchengetedza Gungano Rekugamuchira, inoonekwa seimwe yezvinonyanya kusununguka. Uye zvose nokuti mukati, mhuka uye mamiriro emhepo pachako zvinoratidzika kuti zvinomutsazve tsika dzemhuri imwechete yeSoviet era. Pano zvinhu zvose zvakanyorwa "zveSoviet Union": mukati, fesheni uye kunyange retro-teknolojia ine mavara "Akaitwa muUSSR". Uye zvidyo zvekumba kubika maererano nerekare mapepa zvinowanzosakwikwidzana. Paunenge uri muIzhevsk, iva nechokwadi chekushanyira "Veranda" uye kuongorora nyama yakakangwa muArkhangelsk, mushroom mumuchero weukiki kana mutauro kumba.
Imwe nzvimbo yekutoro muIzhevsk nemimhanzi inorarama ndeyePozym . Inoreva chikafu chezvitoro chezita rimwe chete uye chinotarisana zvose kune zviitiko zvakakosha (kuroorana, zviitiko zvegore, mazuva ekuberekwa) uye kushanda kwezuva nezuva. Vakawanda vemo vanobvumirana kuti iri pano - iyo yakanakisisa yekudya muIzhevsk. "Posme" inofadza nekushanya uye kubwinya kwepamusoro uye kusarudza kukuru kwezvokudya zvinonaka. Uye zvinoshamisa zvakare kuti pamberi pekupinda kwechivako kune chivako chepeleni, sezvo ichizivikanwa kuti ndiro iyi yakagadzirwa muUdmurtia.
Ndezvipi zviri nani kuenda Goa?
Ndekupi kwaungaenda hove?
St. Michael's Cathedral muKiev
Nautical style muzvipfeko 2014
Ndechipi chikonzero chokurota kusangana nevhudzi rake?
Mask kubva kumavara madema ane gelatin
Girofu ine kupisa
Pazuva ripi mushure mekuenda kumwedzi kunoitika ovulation?
Teji yaambuya vanamai vanoyamwisa
Autumn prune kukata
Nzira yekubvisa tenzikadzi wemurume wake sei?
Fashionable shoes shorts-zima 2015-2016
Sei uchirota kuona iwe uri nepamuviri?
Pink inokurudzira vakadzi kuti vasabhadhara kuremera kwavo
Lana Del Rei akaputsa mukomana wake
Mick Jagger naMelanie Hamrick vanobatwa musi weNew York
Angelina Jolie akataura nezvekuberekwa kwake muNamibia
Kuora mwoyo - chii chaunofanira kuita?
Chiso chitsva chaMarc Jacobs chaiva nemakore 70 Bette Midler
Medvedka - sei kurwisa?